2011 Valentine's Day | TechSectors
5:28 AM LeaveaComment
နက်ဖြန် Valentine's Day ရောက်ပြီ - ကိုယ့်ကောင်မလေး - ကိုယ့်ဂျစ်ဂျစ်တွေ ကို ပေးဖို့ ဘာတွေများ စိတ်ကူးထားကြမလဲ မသိဘူး - ဒီအကြောင်းကို ဟိုးတစ်နေ့တည်းက စရေးချင်နေတာ - တစ်ခြားဘက်တွေ လျှောက်ပြီး အာလူးဖုတ်တာ များသွားတာနဲ့ ဒီနေ့မှပဲ စဖြစ်တော့တယ် - အရင်နှစ်တွေကတော့ Valentine's Day ဆိုရင် ဘာပေးရမလဲ ဆိုပြီး တော်တော်ခေါင်းစားရတယ် - ချောကလက်လား ??
ချောကလက်က ဘယ်လိုရည်းစားတွေ ကြိုက်လဲတော့ မသိဘူး - ကျွန်တော်တော့ ချောကလက်ဆို သိပ်မုန်းတာ - စားရတော့ သေးသေးလေး - ရော့ စားဆိုပြီး သူတစ်ကိုက် ကိုယ်တစ်ကိုက် ကိုက်လို့ ကလည်း မကောင်း - လက်နဲ့ ကိုင်ပြန်တော့လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လေက ကလူကလူ - နေကပူပူ နဲ့ လက်တွေပေလို့ပေ - ပါးစပ်ထဲရောက်တော့လည်း အီလည်လည်ကြီး - ကိုယ်က စကျွေးတာ မို့လို့သာ မတတ်သာလို့ ပြုံးပြီး စားနေရပေမယ့် တကယ်တမ်း အာသာလည်း သိပ်မပြေလှ - ချောကလက်စားရင်း ထမင်းစားချင်သလိုလို - အိမ်သာတက်ချင်သလိုလို ကလည်း ဖြစ်သေးတယ် - အဲ့တာကြောင့် ဒီနှစ်တော့ ချောကလက်အစား အခြားတစ်ခု ပြောင်းစားဖို့ စဉ်းစားထားတယ် -
ဖရဲသီး >> ဟုတ်တယ် ဖရဲသီးဆို တစ်ယောက်တစ်ခြမ်းယူ - ဇွန်းနဲ့ ကလော်ပြီး - ခွံ့ကျွေးချင်လား ရသေးတယ် - လက်လည်း မပေဘူး - နေပူပူ လေပူပူမှာ ရေဆာပြေ ရေငတ်ပြေ ဗိုက်ရိုက်စားလို့ ရတယ် - ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တယ် - ဖရဲသီးကို ခွဲလိုက်ရင် အတွင်းသားက ခုလို နီနီရဲရဲလေး -
ကိုယ်မင်းကို ချစ်တဲ့ အချစ်က ဒီဖရဲသားလို ရဲပါတယ်တွေ ဘာတွေ လုပ်လို့ရတယ် -
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ် Valentine's Day ကို ပန်းပေးတာ - ကောင်မလေးတွေ ပန်းကြိုက်တတ်ပေမယ့် ခုခေတ်မှာ အရင်ကလို ဘယ်သူမှ ပန်းကို အမြတ်တနိုးပန်တယ်ဆိုတာ မရှိကြတော့ဘူး - ပန်းပေးလိုက်ရင် ပြုံးပြပြီး ယူပေမယ့် အိမ်ရောက်တော့လည်း ဟိုချောင်ထိုး ဒီချောင်ထိုးပဲ - ကံကောင်းရင် ဘုရားစင်လေး ဘာလေးတော့ ကပ်ပေးကောင်း ပေးမှာပေါ့ - ခိုးချောင်ခိုးဝှက် ချစ်သူတွေဆို ကိုယ်က ပန်းစီးပေးလိုက်တဲ့ အခါ အိမ်ပြန်ယူရအောင်လည်း အခက် - ယူသွားပြန်ရင်လည်း အိမ်က မားသား ဖားသားတွေက စပ်စုပါလိမ့်မယ် - ဘယ်ကရလာလဲ - ဘယ်ကောင်က ပေးတာလဲနဲ့ - ဖြေရှင်းရတာ တော်တော် ခေါင်းခြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်
အဲ့တာကြောင့် ဒီနှစ်တော့ No flowers this Valentine’s Day!
ပန်းမပေးတော့ ပန်းအစား တစ်ခု ပြောင်းပေးဖို့ စဉ်းစားထားတာ ရှိတယ် - ကျွန်တော် စဉ်းစားထားတာတော့ funny-potato ကပေးတဲ့ နည်းအတိုင်း မုန်လာဥနီ ပေးမလားလို့ -
ဒါဆို အိမ်ယူသွားလည်း မခက်တော့ဘူး - အိမ်က မားသား ဖားသားမေးလည်း စားဖို့ ဈေးကဝယ်လာ တယ်ဆိုပြီး သူဖြေလို့ ရတာပေါ့ - ဘာခက်တာလိုက်လို့ - ချက်စားမလား - ကြော်စားမလား - တစ်ခုခုနဲ့ တွဲစားမလား - ထမင်းချိုင့်ထည့်ပြီး ယူသွားဦးမလား - ရုံးရောက်ရင် ဂျစ်ဂျစ်ပေးတဲ့ မုန်လာဥဟင်းလေး ဆိုပြီး တစ်စိမ့်စိမ့် စားလို့လည်း ရတယ် - အရသာလည်း ရှိတယ် - ပန်းဆိုကိုက်စားလို့လည်း မရဘူး -
ဘယ်လိုလဲ IDEAS လေးတွေကောင်းရဲ့လား ?? အကြံကောင်းလေးများရှိရင် မစကြပါဦး -